Goorma ayay Kooxda Chelsea xaqiijin doontaa saxiixa Kai Havertz?? – Gool FM
(London) 09 Agoosto 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la soo warinayaa inay xaqiijin karto todobaadka soo socda heshiiska ay kula soo wareegayso weeraryahanka Naadiga Bayer Leverkusen ee Kai Havertz.
Xiddiga xulka qaranka Germany ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inuu u dhaqaaqayo garoonka Stamford Bridge, inkastoo wadahadalka ku saabsan dhaqaaqa uu xasilloonaa tan iyo markii Leverkusen ay dib u bilaabatay ololaheeda Europa League.
Sida uu warinayo Suxufiga reer Talyaani ee Fabrizio Romano, kooxda reer Jarmal ayaan u badnayn inay cunaqabateyn saaraan ka bixitaankiisa inta laga gaarayo dhammaadka xilli ciyaareedkooda Yurub, taasoo laga yaabo inay ka hor tagto kooxda Inter Milan habeenka Isniinta.
Romano ayaa ka dhawaajiyay in sidaas darteed heshiiskiisa la gabagabayn karo isbuuca soo socda, iyadoo Chelsea ay rajeyneyso in 80 milyan oo euro oo u dhiganta 72 milyan oo gini ay ku filnaan doonto inay ka dhaadhiciso kooxda ka dheesha Bundesliga inay ku iibiso xiddigooda.
Bayern Munich ayaa sidoo kale si xoog leh loola xiririinayey xiddigan weerarka ka dheela, laakiin kooxda haysata horyaalka Jarmalka ayaa la sheegay inay door bid lahayd inay sugto ilaa suuqa xagaaga soo aaddan si ay ula soo saxiixato, halka Manchester United ay u muuqato inay diiradda saareyso dadaalkooda xiddiga Borussia Dortmund ee Jadon Sancho.
21-sano jirkaan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah la qaatay Kooxda Leverkusen intii lagu jiray xilli ciyaareedka 2019-20, isagoo dhaliyay 17 gool, isla markaana caawiyey sagaal gool oo kale tartammada oo dhan.
Koox ka dhisan dalka Spain oo qarka u saaran inay la wareegto Weeraryahanka Arsenal ee Alexandre Lacazette... (Meeqa milyan ayay ku qaadanaysaa?)